Apple na Microsoft gbakọtara iji gbaa mgbasa ozi Ekeresimesi | Esi m mac
Microsoft debara mgbasa ozi ekeresimesi ya site na enyemaka nke Apple na Storelọ ahịa ahụ n'okporo ụzọ nke ise dị na New York
Ekeresimesi na-abiaru nso ma ya na mkpọsa ekeresimesi nke afọ ọ bụla, na-egosi anyị mma na ngwa ngwa nke ụbọchị ndị a, agbanyeghị Microsoft chere otu ihe na-enye ya uzo ozo site na mbipụta ọkwa mara ọkwa maka ekeresimesi a.
Ọ bụ ezie na ọ na-mgbe e chere na e nwere a kpọmkwem ndorondoro n'etiti Apple na Microsoft maka nwere oke ahia kariri Na mpaghara dị iche iche, ọ dị ka ihe oyiyi nke Redmond chọrọ igosi bụ ihe dị iche, na-asọpụrụ ozi nke udo na otu nwanne na-achọ mgbe niile ibupụta n'oge a.
https://www.youtube.com/watch?v=TMATD2qk564 Lo más gracioso de todo es que Microsoft y Apple tienen ogologo oge nke mgbasa ozi nke inwe obi abụọ uto na-akwa emo na ngwaahịa. Ya mere, mgbe anyị hụrụ mgbasa ozi Microsoft n'ihu Storelọ Ahịa Apple, echiche mbụ nke na-abata n'uche anyị bụ "ọzọkwa ha na-etinye aka na ntụgharị ọzọ na-enweghị isi", ọ dịghị ihe ọzọ si n'eziokwu ahụ.
Na ad, filmed dị ka ọ kwuru na XNUMXth avenue, Ndị ọrụ workerslọ Ahịa Microsoft Ha na-ahapụ ndị mmadụ n’ahịrị na-aga ụlọ ahịa Apple ama ama ya na ọnụ ụzọ ahụ yiri iko ụzọ ole na ole. Ma ndị ọrụ Microsoft na-abịa n'udo, na-abụ abụ a na-akpọ "Ka Udo Nwee n'uwa" na otu ìgwè ụmụaka na-agafe agafe ka ndị ọrụ Apple na-ele ebe ahụ.
Mgbe emechara arụmọrụ ahụ, ndị ọrụ Apple ozugbo jaa ndị ọrụ ahụ mma site na Microsoft na-enye ha mmakọ. Ọ bụ mgbasa ozi bara uru ịhụ, ịnwere ike ilele njikọ agbakwunyere na YouTube nke m hapụrụ n'elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Microsoft debara mgbasa ozi ekeresimesi ya site na enyemaka nke Apple na Storelọ ahịa ahụ n'okporo ụzọ nke ise dị na New York
Edeturu Voice Pro, n'efu maka obere oge
TeamViewer 11 dị maka Mac ugbu a